Tipping Blog: Auction PGA | Martech Zone
Asabotsy Jolay 7, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nangataka i Tom mba hanoratako ny bilaoginy, Auctions PGA. Ary faly aho manery! Ny bilaogin'i Tom dia momba ny orinasany eBay ary manara-maso akaiky ireo lavanty izy noho izany misy mpifaninana marobe any ary mila mitady fanampiana isika!
Voalohany, aza hadino ny manitsy ny rohy amin'ilay Alefaso miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny bilaogiko… Rehefa mandika sy mametaka ny kaody HTML mankany amin'ny kaody ianao dia manelingelina ny teny nalaina indraindray. Nanavao ny lahatsoratra tany am-boalohany miaraka amin'ny textarea… Izao raha maka tahaka azy mivantana ianao dia handeha.
Noho ny antony fiarovana dia tokony hanao izany tanteraka ianao fanavaozana WordPress hatramin'ny farany sy lehibe indrindra famotsorana. Novakiako tao amin'ny bilaoginao fa nahita olana tamin'ny fanavaozana ianao. Mbola misy ve izany? Ny kinova 2.0 izao dia amin'ny 2.0.10 raha tsy afaka manatsara ny 2.21 ianao.
Ny motera fikarohana dia mila mahafantatra ny fomba fivezivezena amin'ny tranokalanao. Mahomby izany amin'ny alàlan'ny fitaovana roa. Ny fitaovana voalohany dia fisie robots.txt. Fikirakirana an-tsoratra fotsiny izay vakian'ilay mpikaroka hahafantatra hoe aiza no jerena ary aiza no tsy jerena ao amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny manamboatra ny fisie amin'ny alàlan'ny Notepad fotsiny ary avy eo FTP'ing amin'ny mpizara anao ary apetrakao ao amin'ny lahatahiry tranonkala.
Mpampiasa-maso: * Tsy mahazo: / wordpress / wp- Sitemap: http://www.pga-auctions.com/wordpress/sitemap.xml
Ny fomba manaraka handehanan'ny Search Engine manodidina ny tranokalanao dia amin'ny alàlan'ny a Sitemap. Tiako indrindra ilay 3.0b7 Plugin Google Sitemap. Izaho koa efa nanova azy mba hatolotra ao amin'ny Yahoo! ary koa ary nandefa ny kaody tany amin'ny mpanoratra fa mbola tsy namboariny ho amin'ny famoahana manaraka. Hanangana sitemap ity.
Ankehitriny - manjary sarotra be izany satria manana tranokala sy bilaogy WordPress ianao. Mety tsy fantatrao izany, fa ny famoahana farany an'i WordPress dia manana fiasa iray ahafahanao manao pejy misy ny pejy fandraisam-bahiny ary mifikitra amin'ny bilaoginao any amin'ny toeran-kafa. Izany dia ahafahanao mamindra ny pejinao hafa (FAQ, Politika, sns.) Anananao ao amin'ny bilaoginao ary ampiasan'ny WordPress ianao. Ny tombony dia azonao atao ny manana azy ireo amin'ny sitemap anao namboarina ho azy! Tena manoro hevitra aho ny hanao an'io ary mametraka ny WordPress apetrakao ao amin'ny lahatahiry root an'ny tranokalanao!
Azonao atao ny mamindra ny tranokala nefa tsy manelingelina ny atiny efa noforoninao mba tsy hisy ahiahy ao! Raha manao izany ianao dia aza hadino ny manova ny rakitra robots.txt anao raha hanondro ny sitemap ao amin'ny lahatahiry mety.
Azonao atao koa ny mampiditra eBay hatrany amin'ny WordPress! Amin'ity lahatsoratra hitako, ilay tranonkala no nampiasa ny Kit ny tonian-dahatsoratra eBay manampy an Lisitra fanatobiana entana eo amin'ny sisin'ny pejy WordPress.
Tsy misy olona te handray torohevitra amin'ny olona tsy mitonona anarana, sa tsy izany? Hametraka sary eo amin'ny pejinao About aho. Raha toa ka tsara izany (maneso) dia mety apetrakao amin'ny lohahevitrao isaky ny pejy aza izany. Aza saro-kenatra amin'ny fakantsary - tena mankasitraka ny fahafantarana ny bilaogin'izy ireo vakiany ny olona rehefa mijery azy ireo.
Avadiho ny feed-nao FeedPress amin'ny fampiasana ny plugin WordPress Feedburner mba hahafahanao mamantatra hoe firy ny olona mamaky ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny RSS ary mametraka ny rohy RSS misy sary ambony eo amin'ny sisintaninao mba hahitan'ny olona azy. . Manana safidy hafa koa ny feedburner, toy ny endrika fisoratana anarana mailaka azonao apetraka amin'ny tranokalanao.
Nolazaiko io plugin io tamin'ny roa hafa toro-hevitra: Mba hitazomana ny olona manodidina, dia manoro hevitra ny Plugin mifandraika amin'izany ary apetraho eo amin'ny farany ambanin'ny hafatrao ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany. Amin'izany fomba izany ireo olona mahita anao amin'ny alàlan'ny Search Engine dia hamaky ny lahatsoratranao ary raha tsy hitany izay tena ilainy dia mety hijanona izy ireo amin'ny lahatsoratra fanampiny izay mitovy lohahevitra amin'izany. Hanampy anao koa izany fifandraisana lalina ho an'ny milina Search Engine.
Ahoana no ahalalanao hoe inona ny olona mamaky eo amin'ny tranokalanao? Tsy manana fonosana Analytics mahafinaritra ianao. Tena manoro hevitra aho Analytics amin'ny Clicky Web. Raha mahazo ny kinova Pro ianao, dia azonao atao ny misintona plugin WordPress hananganana anao sy handehananao!
Hahafantatra zavatra betsaka ianao amin'ny fahalalana hoe avy aiza ireo mpitsidika anao, inona no tadiavin'izy ireo, sns.
Momba an'io daholo fahitana, Tom! Mila milaza amin'ny Search Engine izahay ny fomba hahitana anao ary ho tonga ny mpamaky sy ny milina fikarohana. Mahavita asa lehibe ianao amin'ny famoahana sary sy fanoratana lahatsoratra mazava sy fohy. Miavaka ny lohateninao… tsy isalasalana fa rehefa mahita anao ny motera fikarohana dia hanomboka hamaky eo amin'ny mpamaky sy ny fivarotana eBay anao ny bilaoginao!
Tags: bilaogyClickyEbayrohypermalinkLahatsoratra mifandraikafikarohanasecurityWordPress
Jul 9, 2007 amin'ny 2: 37 AM
Tena ilaina amin'ny bilaogy ny fitaovan'ny Analytics, raha tsy izany tsy ho fantatrao izay mitranga amin'ny bilaoginao.
Nanana bilaogy tsy nisy analytics nandritra ny herintaona aho, mandra-pamakiako ny iray amin'ireo famoahana bilaogy toa an'ity. Nampiasa Clicky aho taloha, na izany aza, ny tsara indrindra holazaiko dia GoStats.com , manana rafitra famerenana feno izy ireo.